रबी दाईलाई हामीले बोलाएका थियौं , खाना खाएको विषयलाई अ’तीरन्जीत नगरौं : नायिका शर्मा…हेर्नुहोस!
काठमाण्डौं ।रा,हत बाड्ने क्रममा हामी खाना खाने क्रममा कलाकार अनुराग कुवँर ज्यु को घरमा म लगायत आ,दरणीय किरण के.सी दाइ, दिपक दाइ, दिपा दिज्जु गको थियौ. रेस्टुरेन्ट हरु सबै ब,न्द भको अस्वथामा घरभित्रै बसेर 6/7 जना खाना खानु भनेको सामन्य नै हो!
जस्तो लाग्छ मलाई किनभने प्राय सबैको घरमै 6/7 जना परिवारको सदस्य नै हुन्छन्. हामी ल,कडाउनले पारेको क्ष,तिको बारेमा छलफल गर्दै थियौ. म एस्तो गीत गाउँछु, लक्का जवान, दिपक दाइ दिपा दिदिहरुको भावी सिनेमा को योजनाको छलफल गरिराको थियौ.!
त्यो भन्दा एकदिन अगाडि सरकारले ल,कडाउन खु,कुलो को घो,षण गरिसकेको थियो। अब आगामी हाम्रो देशको स्थित र हाम्रो सिनेमा क्षेत्रको भबिस्यको बारेमा कुरा गर्दा सधै जनताको ह,कहित को लागि बोल्ने र गर्ने आ,दरणीय रबि दाइलाइ सम्झियौ अनि फोन लगायौ ।
रबि दाइ नजिकै हुनुहुदो रहेछ. हामीले मिल्छ भने एकछिन को लागि भेटौ न त.. वहाँले हाम्रो नि,मन्त्रणा लाई स्वि,कार्दै आउनु भयो।
आगामी रा,हत बाड्ने र स्थिति को बारेमा छलफल गरेर खाना खान बसेका हौँ. सामान्री खाना खाको कुरालाइ अ,तिरन्जित नबानाएको हुन्थ्यो. तेस्तो ग,लत गरेको भय किन मैले फोटो पोस्ट गर्थे होला र.. त्यहा लुकाउनु पर्ने के थियो।
भन्ने लागेर नै पोस्ट गरेको हो मेरो स्टोरी मा.. भको कुरा यहि हो…. my immense luv & respect for rabi dai & my all respected seniors .